"ငါတို့ လမ်းခွဲရအောင်"...သူ့ဆီကမမျှော်လင့်ဘဲကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့် ကျွန်မ အရမ်းအံသြခဲ့ရတယ်..စကားမပြောတက်တဲ့လူတစ်ယောက်လို ကျွန်မသူ့ကို ငေးကြည့်နေခဲ့တယ်..ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့လက်တစ်ဖက်လေထဲရောက်သွားတာတော့သိလိုက်တယ်..သေချာပြောရရင်သူ့ပါးပြင်ဆီကို.. ."ဖြန်း".."ကောင်းပြီလေ..ဘာကြောင့်လဲလို့ ငါနင့်ကိုမမေးဘူး ယောက်ျားတစ်ယောက်က စလမ်းခွဲလို့ ဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်ပြီးကျန်ခဲ့မယ့် မိန်းမမျိုးထဲမှာလဲ ငါမပါဘူး..နင်ထွက်သွားလို့ရပြီ".အဲ့ဒါ ကျွန်မပြန်ပြောခဲ့တဲ့ စကား..မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ မာန အတွက် ဒီလောက်တော့ကျွန်မပြောသင့်တယ်လို့ထင်တယ်လေ..ဒါပေယ့် အဲ့ဒါအမှန်တရားမဟုတ်ဖူးဆိုတာတော့ကျွန်မသိတယ်..ဘာကြေင့်လဲဆိုရင်ကျွန်မသူ့ကိုသိပ်ချစ်လို့လေ..
ဒီဒီ ဒါငါ့သူငယ်ချင်း ပြင်ဦးလွင်ကပြောင်းလာတာ..မင်းနိုင်ရဲ့ မိတ်ဆက်စကားကြောင့်ကျွန်မမော့ကြည့်လိုက်တယ်..ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိပြီး အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ မျက်နှာလေးတစ်ခု..အော် အင်း လာလေ ထိုင်..အအေးသောက်ရင်းသူတို့ကို ခေါ်လိုက်တယ်... ကျွန်မဒီဒီ ပါ..မင်းနိုင်နဲ့က ရင်းနှီးတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ..ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော့် နာမည် ညီသန့် ပါ..အဲ့ဒီကစပြီးသူနဲ့ကျွန်မရင်းနှီးခဲ့တယ် စားအတူ သွားအတူပေါ့...မင်းနိုင်ရဲ့ တမင်တကာ ရှောင်ပေးမှုတွေကြောင့်လဲ တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲ ကျွန်မတို့တအားကို ရင်းနှီးခဲ့ကြတယ်..သူက ကောင်မလေးတွေရဲ့ အလိုက်ကို သိတက်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး..ဒါပေမယ့် လူတဖက်သားကို အရမ်းကို ကူညီဖေးမတက်တယ်...ကျွန်မကို အမြဲအဖော်လုပ်ပေးတယ်..စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ခြင်းမရှိတဲ့ ပကတိရိုးသားဖြူစင်တဲ့သူ့ကို ကျွန်မတကယ်ကို သံယောဇဉ်ဖြစ်ခဲ့တယ်..သူလဲ ကျွန်မလိုပဲလို့ထင်ပါတယ်..သိပ်မကြာခင်လေးမှာ သူကျွန်မကိုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်...“ဒီဒီ” ..“ဘာလဲ ညီ”...“ဟိုဟာလေ ငါနင့်ကိုချစ်လို့”...“အမ်.”..အဲလို အရင်းမရှိအဖျားမရှိသူဖွင့်ပြောခဲ့တာ..ကျွန်မမှာ ရင်ခုန်ရမလို ထရယ်တော့မလိုနဲ့...ပြီးတော့ပြောသေးတယ် “ ငါနင့်ကို ညီမလေးလိုလဲ စောင့်ရှောက်ပါ့မယ်”တဲ့ ကဲကြည့်
“ဟင့်အင်း ညီ ငါနင့်ရဲ့ ညီမလေးမလုပ်ချင်ဘူး” “ဟင် ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဒီ ငါ ငါ..နင် ဟာ နင်ငါ့ကိုစိတ်ဆိုးသွားလား ဒီဒီ” တကယ် ညီအရမ်းကို အတယ်...“ ငါနင့်ရဲ့ချစ်သူပဲလုပ်မယ်”...“ဒီဒီ တကယ်ပြောတာနော် နော် ဒီဒီ ဟုတ်လား”....ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ ကျွန်မသူ့ကို အရမ်းချစ်တယ်..
ချစ်သူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းလဲ သူကျွန်မအပေါ်အရမ်းကို အနွံတာခံခဲ့တာ..ကျွန်မဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး သူစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာ မရှိ..ဘာပြောပြောမငြိုငြင်တက်ခဲ့ဘူး..သူက အဲ့ဒီလိုချစ်သူမျိုးလေ...
အော်သူ့ပုံစံလေးက အသားဖြူဖြူ အရပ်ရှည်ပြီး ဆံပင်အဝါရောင်ဆေးဆိုးထားတယ် ဆံပင်လဲနဲနဲရှည်တယ်..မိန်းမချောချောတယ်လို့လဲပြောလို့ရတယ်..ဖြူစင်တဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ညီက ကျွန်မထက်တော့ ၂ နှစ်ငယ်တယ်..
တခါတလေ ကလေးလေးလို ဆိုးနွဲ့တက်ပြီး ကျွန်မဆုံးမရင် အမြဲလက်ခံတက်သူလေ..ဒီလိုချစ်သူမျိုးက လမ်းခွဲစကားစပြောလာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ အိမ်မက်တောင်မမက်ဖူးဘူး...ဒါပေမယ့်လဲ တကယ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်..ချစ်သူဖြစ်ပြီး ၂ နှစ်လောက်မှာ သူကျွန်မကို လမ်းခွဲခဲ့တာပါ...အကြောင်းပြချက်ကို ကျွန်မ မမေးခဲ့သလို သူလဲမပြောပြခဲ့ဘူး.....
ဒါပေမယ့် ကျွန်မသူ့ကို တစ်ရက်မှ မေ့မရခဲ့ဘူး ..ဘယ်နေရာသွားသွားသူ့ရဲ့အရိပ်တွေချည်းပဲ..နေ့တိုင်းပဲ ကြိတ်ငိုနေရတာ အရမ်းလဲ ပင်ပန်းတယ်...အစားလဲလဲ မှန်မှန်မစားနိုင်လို့ ဖျားခဲ့ရတာလဲ အကြိမ်ကြိမ်..အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲ တစ်နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကို ကျော်လာတဲ့အခါ နဲနဲတော့နေသားရလာခဲ့တယ်..
တစ်ရက် ကျွန်မပျင်းတာနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်လာခဲ့တယ်..အပြန်ကျတော့ လေကောင်းလေသန့်ရှုချင်လို့မြစ်နားလေးက လမ်းလျှောက်ပြီးအပြန်ပေါ့..ဟိုးဝေးဝေးမှာ အရိပ်ကလေးနှစ်ခုလှမ်းမြင်သလို တစ်ခုသောအရိပ်က ကျွန်မနဲ့သိပ်ရင်းနှီးနေသလို..ဘုရား ဘုရား ရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်လာပြီး လက်ဖျားတွေအေးစက်လာသလို...အရိပ်နှစ်ခုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရချိန်မှာ..ခုန်နေတဲ့ ကျွန်မနှလုံးသား လုံးဝရပ်တန့်သွားသလို အသက်ရှုတာပါ တခါထဲရပ်သွားသလို...
အမလေး ညီလေ..ကျွန်မချစ်တဲ့ညီပေါ့...သူ့နားမှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကြည်နူးလို့ မုန့်တွေခွံကျွေးရင်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဖက် လောကကြီးကို မေ့ပြီးပျော်နေလိုက်ကျပုံများ......
ကျွန်မနေရာမှာ တင်ဒူးတွေခွေကျသွားတယ်..အဲ့ဒီတော့ ကျွန်မရှေ့ကိုရောက်နေတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် လာပြေးထူတယ်လေ....“ မထိနဲ့ ငါ့ကို မထိနဲ့”..ကျွန်မအသံ ဘယ်လောက်ကျယ်သွားလဲ ဘေးနားကလျှောက်သွားနေတဲ့ လူတွေလှည့်ကြည့်ကြတယ်....“ ညီ နင်က နင်က.....” စကားတွေထွက်မလာပါ..“ ငါနဲ့ လမ်းခွဲတာ....ဒါကြောင့် ..ဒါကြောင်..”..ကျွန်မစကားပြောနိုင်တဲ့အင်းအားမရှိတော့ပါ..အသက်ရှုလို့လဲမရတော့ပါ...သူတို့ပုံရိပ်တွေမှာ ဝေဝါးသွားရင်း...................
ကျွန်မသတိရလာတော့ ဆေးရုံတစ်ခုရဲ့ကုတင်ပေါ်မှာ အနားမှာ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းမင်းနိုင်
“ဒီဒီ စကားမပြောနဲ့ နင်အရမ်းပင်ပန်းနေပြီ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူလိုက်..အားလုံးငါ သိပြီးသား..”
“ဘာ နင်သိတယ် ဘာကြောင့်ငါ့ကိုမပြောပြခဲ့တာလဲ”
“ပြောတော့ရောဘာထူးမှာလဲ ဒီဒီ နင့်ကိုဒီထက်ပိုနာကျင်စေတာပဲအဖတ်တင်မယ် ဒီမှာ နင့်အတွက် ညီပေးခဲ့တဲ့စာ”
ကတုန်ကယင်နဲ့ စာလေးကို ဖွင့်ဖတ်ကြည့်တော့....
တောင်းပန်တယ်ဆိုတာထက် ငါနင့်ကို ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး..
တကယ်တော့ ငါနင့်ကို ညီမလေးတစ်ယောက်လိုပဲ ချစ်ခဲ့တာ..
ငါထင်တာ ငါ့မှာချစ်သူကောင်မလေး တစ်ယောက်ရှိရင် ငါ့ရဲ့စိတ်တွေမဖောက်ပြန်ဘူးထင်ခဲ့တာ..
သူနဲ့ရင်းနှီးပြီးနောက်ပိုင်း ငါကိုယ်ငါ ဘာလဲဆိုတာ ပိုသေချာသိလာခဲ့တယ်...
ညာချင်ပေမယ့် အသွေးအသားထဲက ခံစားချက်ကို ငါဖျောက်ပစ်လို့မရနိုင်ခဲ့ဘူး...
နင့်ကိုလဲ ဆက်ပြီးမလိမ်ချင်တော့လို့ ငါ နင့်ကို လမ်းခွဲခဲ့တယ် ဒီဒီ...
ငါမှားတယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်...တောင်းပန်ပါတယ် နင်က ငါ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်း အမဆိုရင်လဲ ဟုတ်တယ်
ငါနင့်ကို နာကျင်စေတဲ့အတွက် ငါကိုယ်တိုင်လဲ တစ်နေ့နေ့ ပြန်လည်နာကျင်ဦးမှာပါ..အဲ့ဒီနေ့ကို ငါ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးစောင့်နေပါတယ် ဒီဒီ.
ကျွန်မကို ဟာသလုပ်ပြီးရယ်နေတဲ့ လောကကို ကျွန်မ ဘယ်လိုအင်အားနဲ့ အန်တုနိုင်မှာတဲ့လဲ....
ဒီလိုလူမျိုးကိုမှ ချစ်မိတဲ့ ကျွန်မနှလုံးသားကို ရော ကျွန်မ ဘယ်လိုလွန်ဆန်ရပါ့မလဲ...
မလဲ ပေါင်းများစွာနဲ့ နာကျင်နေတဲ့ ကျွန်မရင်ဘတ်ကြီး...ဖြစ်နိုင်ရင်ခွဲထုတ် ဖျက်ဆီးလိုက်ချင်တယ်...
မပြီးနိုင်သေးတာက ကျွန်မရဲ့ ခံစားချက်တွေ..နာနာ ကျင်ကျင်ကြီး ဘဝကို ရှေ့ဆက်နေရတယ်..
ပင်ပန်းလိုက်တာ ...အရင်ကထက် နှစ်ဆတိုးလာ သလို..
တောင်းပန်ပါတယ်လောကရယ် ကျွန်မကို သနားသောအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းခွင့်လေးပေးပါ....................
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 8:10 AM2comments:
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 4:46 PM No comments:
အထက်တန်းကျောင်းတက်စဉ်က ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ..ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ အချိန်လဲမလောက်တာနဲ့ ရင်ထဲမှာ အမြဲရှိနေတဲ့ ကဗျာလေးချရေးဖြစ်ခဲ့တယ်...
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 5:46 PM No comments:
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 3:34 AM No comments: